एलन मस्क - विकिपिडिया
(इलोन मस्क बाट पठाईएको)
२०१५ मा एलन मस्क
एलन रिभ मस्क
(१९७१-०६-२८) जुन २८, १९७१ (उमेर ४७)
प्रिटोरिया, Transvaal, दक्षिण अफ्रिका
Bel Air, लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया, U.S.
दक्षिण अफ्रिका (१९७१-वर्तमान)
उद्यमी, ईन्जिनियर, र लगानीकर्ता
यूएस $ १९ .६६ अरब (अप्रिल २०१८)
स्पेस एक्स को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO
टेस्लाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO
Neuralinkको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO
द बोरिङ्ग कम्पनी को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO
जस्टिन विल्सन मस्क (विवाह २०००–२००८) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"विवाह: जस्टिन विल्सन मस्क to एलन मस्क" Location: (linkback://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%B2%E0%A4%A8_%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95)
तलुला रिले (m. २०१०–div. २०१२; m. २०१३–div. २०१६)
Errol Musk (बुवा)
Maye Musk (अामा)
Kimbal Musk (भाई)
इलोन रिभ मस्क (जन्म जुन २८, १९७१) एक दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएका क्यानेडियन-अमेरिकी व्यवसायी, लगानीकर्ता, इन्जिनियर हुन् ।
उनी स्पेस एक्सका संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख प्राविधिक अधिकृत र टेस्ला मोटर्सका सह-संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उत्पादन आर्किटेक्चर हुन् ।
एलन मस्कले गरेका व्यापार र उद्यमको सूची हेर्ने हो भने कुनै पनि परम्परागत खालका लाग्दैनन्, बरु उनले सुरु गरेका हरेक व्यवसाय अरूका लागि आश्चर्य र मार्गदर्शक बन्ने गरेका छन् । अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम पेपाल होस् वा स्पेस एक्स वा विद्युतीय कार निर्माणमा क्रान्ति ल्याएको टेस्ला कार नै किन नहोस् । एलन मस्कले कसैले नसोचेको व्यवसायमा हात हाल्छन् र त्यसलाई सम्भावनाको ठूलो क्षेत्र भएको पुष्टि गर्छन् ।
३ स्पेस एक्स
४ टेस्ला मोटर्स
५ अन्य अवधारण
दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा जन्मेका उनी क्यानेडियन आमा र दक्षिण अफ्रिकी बाबुका सन्तान हुन् । उनी १० वर्षको छँदा उनका आमाबुबाको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । सानो छँदा उनी आफैंले कम्युटर प्रोग्रामिङ सिकेका थिए, जसले उनलाई नयाँनयाँ प्रविधिमा फरक काम गर्न सक्षम बनायो ।
मस्क अमेरिकी व्यवसायी हुन्  । उनको जन्म भने दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९७१ मा भएको थियो । उनी विशेषत: सन् १९९९ मा स्थापित एक्हडटकम, जुन पछि गएर अनलाइन पेमेन्ट सेवा पेपाल बन्यो । उनी त्यसैका संस्थापकका रूपमा चिनिन्थे । तर, पछिल्लो समय उनको परिचय केही बदलिएको छ । उनले सन् २००२ मा स्थापना गरेको स्पेस एक्स र सन् २००३ मा स्थापना गरेको टेस्ला मोटर्सले उनलाई चर्चामा ल्याइरहन्छ । अनलाइन सेवा दिने कम्पनी जिपटु सन् १९९९ मा कम्प्याक्ट कम्युटर बिक्री गरेपछि मस्क २८ वर्षकै उमेरमा अर्बपति बनेका थिए ।
त्यसयता उनी अर्बपतिको सूचीबाट हटेका त छैनन् तर बेलाबेला टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छन्, नयाँनयाँ व्यवसाय गर्ने आफ्नो सोचका कारण । उनले स्थापना गरेको कम्पनी स्पेस एक्सले पहिलो व्यावसायिक परीक्षणका रूपमा अन्तरिक्ष स्टेसनमा सफलतापूर्वक रकेट पठाएपछि सन् २०१२ मा उनको ठूलै हाई हाई भयो । सरकारीबाहेक निजी तवरबाट अन्तरिक्षमा रकेट पठाउने उनको सोच अचम्मकै थियो । सुरुमा यसलाई धेरैले हावादारी भने पनि अहिले स्पेस एक्स अन्तरिक्षमा मानव यात्री व्यावसायिक रूपमा लैजाने योजनामा छ ।
फोब्र्सका अनुसार सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्मको तथ्यांकको आधारमा मस्कको कुल सम्पत्ति २० अर्ब डलर छ । १९९९ मा जिपटु बिक्री गरेका उनले त्यसको तीन वर्षपछि सन् २००२ मा अनलाइन पेमेन्ट सेवा दिने कम्पनी बिक्री गरे । व्यक्तिगत सम्पत्तिको आधारमा अर्बपति सूचीमा पनि रहिरहे । पेपाललाई इबेले डेढ अर्ब डलरमा किनेको थियो ।
स्पेस एक्स[सम्पादन गर्ने]
पेपालको बिक्रीपछि अन्तरिक्षमा व्यावसायिक उडान थाल्ने उद्देश्यसहित मस्कले नयाँ कम्पनी स्पेस एक्स स्थापना गरे। सन् २००८ मा स्पेस एक्सलाई अमेरिकी अनुसन्धान निकाय नासाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा कार्गो पुर्‍याउने जिम्मा दियो । सन् २०१२ को मे २२ मा स्पेस एक्सले आफ्नो पहिलो फाल्कन नाइन रकेटको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गर्‍यो ।
यो रकेट १ हजार पाउन्ड सामान बोकेर अन्तरिक्ष स्टेसन पुगेको थियो । यो एक निजी कम्पनीले अन्तरिक्षमा रकेट पठाएको पहिलो घटना थियो ।
यसको एक वर्षपछि फाल्कन नाइन रकेटले पुन: अन्तरिक्षको तल्लो तहमा एक उपग्रह (स्याटेलाइट )लाई सफलतापूर्वक छाडयो । सन् २०१५ मा स्पेस एक्सले आफ्नो अर्को उपग्रह स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा छाडयो, जसले सूर्यले छाड्ने विकीकरणको निरीक्षण गथ्र्यो । अघिल्लो वर्ष उनको कम्पनीले फेरि अर्को इतिहास रच्यो, यसले पुन: प्रयोग गरिएको सामान प्रयोग गरी फाल्कन नाइन रकेटले सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गर्‍यो । यसले रकेटको निर्माणको लागत कम गर्ने र मानिसको अन्तरिक्ष यात्रा कम हुने सम्भावना देखाएको छ । दुई महिनाअघि स्पेस एक्सले अहिलेसम्मकै शक्तिशाली फाल्कोन हेभी रकेटको प्रक्षेपण गर्‍यो र अन्तरिक्षमा अहिलेसम्म लगिएको भन्दा धेरै गुणा बढी सामान ढुवानी गर्न सकिने सम्भावनाको पुष्टि गर्‍यो ।
स्पेस एक्सले सन् २०२२ सम्ममा करिब एक सय मानिससहित कार्गो रकेट अन्तरिक्षमा पठाउने लक्ष्य राखेको छ । स्पेस एक्सले अन्तरिक्षको तल्लो तहमा सानासाना स्याटेलाइट राखेर पृथ्वीमा द्रुतगतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनामा पनि काम गरिरहेको छ ।
टेस्ला मोटर्स[सम्पादन गर्ने]
मस्क सस्तो र सुविधायुक्त विद्युतीय सवारी बनाउन तल्लीन टेस्ला मोटर्सका पनि संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्  । यसले विद्युतीय कार र ट्रक बनाएर सफलताको छनक दिइसकेको छ । साथै यस्ता गाडीको छतमा सोलार राख्ने र त्यसैबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने बनाउने कम्पनीको योजना छ । सन् २००३ मा स्थापना भएको कम्पनीले ५ वर्षपछि २००८ मा रोडस्टर नामक स्पोर्टस कार सार्वजनिक गरेको थियो, विद्युतबाट चल्ने कार ३ दशमलव ७ सेकेन्डको अवधिमा ९ बाट ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडिन सक्छ । यसको लिथियम ब्याट्री फुल चार्ज हुँदा ४ किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ । सन् २०१० मा खुलेको टेस्लाको इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) ले २२ अर्ब (२२६ मिलियन) डलर बढी लगानी उठाएको थियो ।
कम्पनीले सन् २०१३ मा अर्को कार मोडल एस सार्वजनिक गर्‍यो, जसलाई मोटर ट्रेन्ड म्योजिनले उक्त वर्षको उत्कृष्ट कारको उपाधि नै दियो ।
अघिल्लो वर्ष टेस्ला जेनेटर मोटर्सलाई अमेरिकाको सबैभन्दा धनी कार उत्पादक बन्यो । केही अघि कम्पनीले नयाँ मोडलको ट्रक र कार टेस्ला सेमी र रोडस्टर सार्वजनिक गर्‍यो । सन् २०१९ देखि उत्पादन थाल्ने टेस्ला सेमी ट्रकमा एकपटकको चार्जमा ८ सय किलोमिटर गुड्न सक्ने क्षमता छ । नयाँ मोडलको रोडस्टर सन् २०२० देखि उत्पादन हुनेछ, जुन १ दशमलव ९ सेकेन्डमा ० देखि ६० किलोमटिर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडन सक्छ । कम्पनीले विद्युतीय कारको डिजाइन, गति र कार्यक्षमता पनि उत्कृष्ट बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, कुनै समस्याबिना उनको कम्पनी चलिरहेको भने छैन । टेस्लालाई कार उत्पादन थाल्नका लागि लगानी अभाव भइरहेको छ । यसबारे सञ्चार माध्यममा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
अन्य अवधारण[सम्पादन गर्ने]
आफ्ना स्थापित कम्पनीबाहेक मस्क अन्य रोचक अवधारणका कारण चर्चित छन् । उनले सन् २०१३ मा ठूला सहरबीच चाँडै यात्रा गर्न यातायातको नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरे, जसलाई हाइपर लुप भनिन्छ । रेलजस्तै लाग्ने यो अवधारणाले कम चाप हुने टयुबमा रेलजस्ता डिब्बा ७ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा दौडन सक्ने मस्कको दाबी छ । यसलाई १० वर्षभित्र बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।
व्यावसायिक जीवनमा सफल बने पनि मस्कको पहिलो विवाह भने सफल भएन । सन् २००२ मा जस्टिन विल्सनसँग विवाह गरेका मस्कले सम्बन्ध विच्छेद गरी पुन: २०१० मा कलाकार तलुला रिलेसँग दोस्रो विवाह गरे । उनीसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेका उनले सन् २०१३ मा फेरि उनीसँगै दोस्रो विवाह गरे ।
↑ "Billionaire Tesla CEO Elon Musk Buys Neighbor's Home in Bel Air For Million", Forbes, अभिगमन मिति नोभेम्बर १, २०१३।
↑ "Inside Elon Musk's M Bel Air Mansion", Bloomberg News, मूलबाट फेब्रुअरी ७, २०१५-मा सङ्ग्रहित, अभिगमन मिति अगस्ट २१, २०१३।
↑ Hull, Dana (अप्रिल ११, २०१४), "Timeline: Elon Musk's accomplishments", अभिगमन मिति जुन ११, २०१५ – Mercury Newsद्वारा।
↑ Zanerhaft, Jaron (२०१३), "Elon Musk: Patriarchs and Prodigies", CSQ, C-Suite Quarterly, अभिगमन मिति जुन ११, २०१५।
↑ "Elon Musk", Forbes (अङ्ग्रेजीमा), अभिगमन मिति अप्रिल ७, २०१८।
↑ "Actor Talulah Riley files to divorce billionaire Elon Musk, again", The Guardian, मार्च २१, २०१६, अभिगमन मिति अप्रिल २०, २०१६, "The pair first married in 2010 and divorced in 2012. They remarried 18 months later."
↑ "Elon Musk withdraws Talulah Riley divorce papers after being spotted at Allen & Company conference", Mail Online, अगस्ट ५, २०१५।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=एलन_मस्क&oldid=671131" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:४७, १९ अगस्त २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।